Ngaba abaphathi kufuneka basebenzise iGPS ukulandelela abasebenzi babo | I-Singapore ephezulu ye-GPS ye-GPS Tracker ye-Autism / ye-Autistic yabantwana kunye neDementia yabantu abadala
Ezomthetho: Ewe zikho
Umcimbi wobumfihlo xa ulawula abasebenzi abahamba ngefowuni usebenzisa i-GPS ibaleke imilambo ye-inki, ukuya kuthi ga apho baninzi abantu kumacala omabini, kwinkampani nakwabasebenzi, abenza umbuzo ofanayo.
Kukho iinkampani ezifuna ukukhangela okanye ukulandelela inqanaba lomsebenzi wazo ngeGPS. Ngale nkqubo yokulandela umkhondo we-GPS, unokulawula umsebenzi wakho kwaye wazi apho ukhoyo ngalo lonke ixesha. Kodwa ngaba kusemthethweni ukusebenzisa lo vimba kwinkampani?
Abaqeshi bavunyelwe ukuba babeke esweni abasebenzi babo, kodwa babe kuphela ngumda omxinwa. Inkqubo zokujonga kunye nolawulo, ezijolise kuphela ekubekweni esweni kokuziphatha kwabasebenzi emsebenzini, zithintelwe ngokupheleleyo ngumthetho wabasebenzi (Art. 26 ArGV3). Apho kufanelekileyo ukubekwa esweni, umzekelo, ukuthintela ubusela okanye ukuceba ukusebenza ngcono, akufuneki baphazamisane nenkululeko yabasebenzi yokuhamba.
Ukubeka iliso kwi-GPS kuvunyelwe, ngokutsho kwabameli babucala. Kodwa kuphela xa ulingano, ke abasebenzi abalawulwa ngokungeyomfuneko kwaye baxinezelekile. Umqeshi, ke ngoko, kufuneka abeke esweni abaqeshwa bakhe ngokusisigxina kuphela, ukuba oku kuyimfuneko ngezizathu zokhuseleko, umzekelo. Oko kubizwa ngokuba kukubeka esweni okwenyani kuvunyelwe, umzekelo, ukulandelela ukuthuthwa kwemali okanye xa uthutha iimpahla eziyingozi.
Abasebenzi bazisiwe malunga nokubek'esweni kwaye baxelelwe malunga nokuba kutheni ukubek'esweni kwenzeka, yeyiphi idatha eqokelelweyo, ngubani onelungelo lokufumana le datha, ukuba igcinwe ixesha elingakanani kwaye abasebenzi banelungelo lokufikelela.
Into yokuqala ekufuneka uyenzile kukwazisa umsebenzi ukuba uza kufumaneka nge-GPS ukuphatha inzuzo yakhe yomsebenzi. Ngale ndlela, uya kwazi ukuba idatha eqokelelwe ngeGPS ingasetyenziselwa iinjongo ezinjengokusebenza kwenkqubo, ukhuselo olwandisiweyo, ulawulo lomsebenzi, iinkqubo zokuvuselela intsebenzo kunye nezohlwayo ezinokubakho.
Abaqeshi banokubeka izixhobo ze-GPS kwizixhobo ezahlukeneyo, kubandakanya nezithuthi kunye neeselfowuni. Oku kunika umqeshi-ukuya kwimizuzu iinkcukacha zendawo ahlala kuyo umqeshwa, eboniswe ngumnxibelelanisi we-longitude kunye ne-latitude, oya kuthi emva koko aziswe kwiqela ukuba umqeshi akwazi ukubeka iliso kuye. Ukuba ifakwe kwisithuthi, isixhobo se-GPS sikwanokunika isantya kunye nokuhamba kwesithuthi.
Ngaba kusemthethweni ukubeka iGPS kwifowuni ephathekayo kumsebenzi?
Logama ifowuni okanye ithebhulethi iyeyakho yenkampani ingenguye umsebenzi, impendulo icacile: ewe. Ngaphandle koko (ukuba isixhobo singesomsebenzi) kufuneka aziswe kwaye anike imvume yakhe ukuba ifumaneka ngefowuni.
Umqeshi unobuchwephesha be-GPS kwaye ayibeka kwisixhobo senkampani umsebenzi wakhe ahamba naso ngaphandle kwesidingo semvume yokusebenza kwangaphambili.
Izinto ekufanele ziqwalaselwe indawo eyi-GPS
Nangona umqeshwa eqhelene neli nyathelo, awungekhe ulahlekelwe ngumgaqo wokulingana ukwenzela ukuba ufumane umsebenzi nge-GPS ngokusemthethweni.
INkundla yezomGaqo-siseko iseke uthotho lwemida yoko ithathela ingqalelo amalungelo asisiseko omqeshi ekufuneka ahlonelwe. Kule meko, iindlela ezilandelela umkhondo we-GPS ziya kuba semthethweni lo gama nje zihlangabezana nezi mfuno zilandelayo:
Ukufakwa kwe-GPS kufuneka ikwazi ukufezekisa injongo esetyenziselwa yona.
Lo mlinganiso uyimfuneko njengoko kungekho lunye unyango olungcono ngakumbi lokufezekisa injongo ngokusebenza okufanayo.
Umgwebo wokulingana okungqongqo
Lo mgangatho kufuneka ulungelelane, ufumana izibonelelo ezininzi okanye izibonelelo zenzala ngokubanzi kunokonakalisa amanye amaxabiso okanye iiasethi ezingqubanayo.
Ukwazi ukuba usebenzisa inkqubo yokulandela umkhondo we-GPS ukulawula abasebenzi, kusemthethweni ukuba kwenziwe uphando kwaye kucace gca ukuba, naphantsi kwazo naziphi na iimeko, inkampani inokufumana umsebenzi ngaphandle komhla wokusebenza kwayo.
Ke ngoko, izixhobo okanye izithuthi apho kufakwe khona inkqubo yokulandela umkhondo we-GPS inokukhetha ukwenza lo msebenzi kwiimeko apho ziya kusetyenziselwa izinto zabucala.
Oko kutshiwo nguMthetho woKhuselo lweDatha
I-LOPD ikwenza kucace ukuba xa ujongene nedatha yangasese kunyanzelekile ukuba ubakhusele ngaphandle kokuba kukho umthetho ochasene nayo. Yiloo nto eyenzekayo kwinqaku lama-20.3 leNgxelo yaBasebenzi, "umqeshi angathatha amanyathelo athi abona kufanelekile ukubek'esweni nokulawula ukuqinisekisa ukuthotyelwa komsebenzi ngemfanelo nemisebenzi yakhe, egcina ekwamkelweni kwakhe kwaye nam ndiyasebenza. ingqalelo ngenxa yesidima sabo sobuntu ”
Ngayiphi na imeko, kulandela ukuba, nangona umqeshi enokufaka i-GPS kwiselfowuni yomsebenzi, oko akumkhululi kwisibophelelo sokwazisa umqeshwa othile, onelungelo lokwazi ukuba 'ubekw' esweni. "
Ulwazi oluqokelelweyo lungagcinwa ixesha elingakanani?
Kule meko, kukwakho noluhlu lwemigaqo-nkqubo yolondolozo lwedatha efunyenwe ibango lokungahloniphi amalungelo abasebenzi. Elona xesha liphezulu lolwazi olufunyenweyo lingagcinwa ziinyanga ezi-2, nangona le datha yendawo inokugcinwa ixesha elide.
Idatha igcinwe ixesha elide
Ukuba le datha isetyenziselwa ukubonisa ukwenziwa kwenkonzo xa kungekho bungqina bunokunikwa ngenye indlela. Kule meko, unokugcina ulwazi ukuya kunyaka omnye.
Ukuba kukho umgaqo othile obonelela ngale meko, ngexesha elimiselweyo.
Ukuba ulondolozo lusetyenziselwa ukugcina imbali kunye nazo zonke iindawo zokufudukela kwenye indawo ukwenza lula iindlela ezenziweyo, zingagcinwa ixesha elingangonyaka.
Idatha enokuthi umqeshi abe nayo kwi-GPS
Ixesha lokuqala usuku
Iiyure apho kuyekwe khona ukwenziwa
Iindawo apho udlula khona nesithuthi senkampani kunye nokuma
Ngamaxesha xa imoto ibaleka kwaye imisiwe nini
Imayile eyenziweyo ngosuku ngalunye lokusebenza
Ngayiphi na imeko, akukho nto inxulumene nobomi bakho okanye usapho kunye nayo yonke into enomda wabucala.
Njengoko ubona, ukubonelela umsebenzi nge-GPS kufuneka kuhlangatyezwane neekhrayitheriya zobuchule kwaye kufanele ukuba kubekwe kwinqanaba lokubonelela ngeenkonzo zabasebenzi.
4457 Ubutyebi Bonke Imibukiso ye-19 Namhlanje